Nweta Poco M3 Pro na ọnụahịa kachasị mma na nkwalite mmalite a | Gam akporosis
Pocophone aghọwo onye nrụpụta nwere ọtụtụ ngwaọrụ na ahịa nke a ga-atụle maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke ha niile. Otu n'ime ihe ngosi kachasị ọhụrụ bụ Poco M3 Pro, ama dị mkpa iji tụlee mgbe ịchọrọ ịbanye n'ụzọ dị elu n'etiti elu.
Poco M3 Pro bụ ekwentị 5G nwere atụmatụ dị mkpaN'ime ha bụ ihe nhazi dị ike na ihe dị mkpa, batrị ahụ bụ 5.000 mAh. Ọ bụ ọnụ ka a tụlere nyere na ọnụahịa ahụ dị mkpa ma kwe nkwa inye nnwere onwe ụbọchị niile ịhụ obere nri ya.
1 Etu ị ga - esi were uru Poco M3 Pro na - enye
2 Little M3 Pro, ngwaọrụ 5G
3 Ike batrị dị elu
4 Igwefoto azụ atọ
5 Njikọta na sistemụ arụmọrụ
Etu ị ga - esi were uru Poco M3 Pro na - enye
Nkwalite ahụ ga-adị naanị awa 48, Na-amalite site na 20, yabụ ị kwesịrị iji ya mee ngwa ngwa iji zụta Poco M3 Pro ọhụrụ gị site na ntinye mmalite a. Koodu nkwado ị ga - abanye na Aliexpress bụ MMA 12 ị ga-enweta mbelata $ 10 (€ 8,40).
Ọ bụrụ na ibi na Russia, ị ga-erite uru na a nke abụọ extra coupon nke ahụ ga - agwụ n'ime awa 24 (ya bụ, na Mee 21): AKW PKWỌ, ma dị ka anyị na-ekwu na adreesị gị ga-abụrịrị Russian.
Rite uru na onyinye a ma jiri coupon gị na njikọ ndị a:
> Nweta nkwalite Aliexpress ebe a
Little M3 Pro, ngwaọrụ 5G
Otu uru ya bara bụ na ọ bụ ekwentị nke ise, na-enye mgbawa Dimensity 700 nke na-enye njikọta 5G. Emeputa nwere nkwado a, na-enye ọnụ ọtụtụ ike ma a bịa n'ịrụ ọrụ na ngwa na-esote ọgbọ.
GPU bụ ARM Mali-G57 MC2, ọ na-abata na ihe nhazi Dimensity 700 ma nye gị ikike ịkwaga kpamkpam, niile maka Ram gụnyere, nke nwere ike ịbụ na nhọrọ abụọ. Modeldị nke mbụ bụ ebe nchekwa 4 GB nke LPDRR4X, ebe nke abụọ bụ 6 GB.
Ugbua na atụmatụ nchekwa ị nwere ike ịhọrọ n'etiti nhọrọ abụọ, nke mbu bu 64GB, nke abuo di okpukpu abuo na 128GB UFS 2.2. O nwere oghere maka MicroSD, yabụ ọ ga - enye uto ma ọ bụrụ na ịchọrọ ohere karịa maka foto, vidiyo na dọkụmentị.
Otu n'ime ike na-abụghị 5G bụ batrị gụnyere dị ka ọkọlọtọ, ọ na - aghọ 5.000 mAh, zuru oke iji ụbọchị niile na obere mgbalị. Ọ bụ batrị nke arụ ọrụ iji rụọ ọrụ karịa awa 24 na-enweghị ike ịchọpụta mbọ ahụ yana ngwa ndị bụ isi nke ụbọchị ruo ụbọchị.
Batrị batrị bụ 18W, na-akwụ ụgwọ site na 0 ruo 100% n'ihe karịrị otu elekere, ebe ọ bụ na ọ dị mma ka ị na-akwụ ụgwọ ya karịa 20%. Obere M3 Pro maka Dimensity 700 ọ gaghị abụ nnukwu oriri ma agaghị ebu ya ebubo na-erughi otu ụbọchị zuru ezu.
Igwefoto azụ atọ
Poco M3 Pro 5G nwere ihe mmetụta anọ, atọ na azụ na ihu ihu iji mee ka foto ndị dị mma mgbe ha na-ese foto ebe ọ bụla. Igwefoto dị n’azụ bụ megapixels 48, nke abụọ bụ nnukwu megapixel 2, nke atọ bụ ihe mmetụta omimi 2 megapixel.
Ugbua n'ihu ya ka ejiri ya na 8 megapixel selfie sensor, àgwà ikpeazụ ga-ezu iji were ezigbo ihe oyiyi, dekọọ vidiyo na nkọwa dị elu na vidiyo vidiyo. Ọzọkwa, gbakwunye AI iji nye nghọta na oge ọ dị mkpa.
Poco M3 Pro 5G nwere ọtụtụ njikọta mgbe ị na-ejikọ, gụnyere ihe atụ na-efe efe na thanksntanetị na-ekele 5G 5G NSA / SA Njikọta. Mgbawa ahụ ga-abawanye ọsọ nke iji ọnụego data na ụlọ ọrụ ọ bụla na-enye atụmatụ data nke ise.
5G gụnyere njikọ Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, Dual SIM, GPS, ihe mmetụta IR (Infrared) ma gbakwunye jaak 3.5 mm. Kpọghe ekwentị bụ mpụtaIji mee nke a, ị ga-ahazi ya ozugbo ekwentị malitere na usoro ole na ole, dịka ọ na-eme na ngwaọrụ dị iche iche.
A na-emelite sistemụ arụmọrụ na ụdị kachasị nso, ọkachasị gam akporo 11 site na mmelite ndị kachasị ọhụrụ maka ọnwa Eprel. Akwa nke Poco M3 Pro 5G jiri bụ MIUI 12 maka POCO, na-enye ọtụtụ njirimara nke njedebe ụlọ ọrụ Xiaomi, n'agbanyeghị na ọdịdị dị iche.
Obere M3 PRO
IKIRU 6.5-anụ ọhịa Full HD + IPS LCD / 90 Hz ume ume ọnụ / ozodimgba iko 3
GPU Ogwe aka Mali-G57 MC2
Ohere TERLỌ N'IME 64/128 GB UFS 2.2
Gbanwee CAMERA 48 MP f / 1.79 isi ihe mmetụta / 2 MP macro sensor / 2 MP omimi sensor
N'ihu CAMERA 8 MP f / 2.05
UMUAKA 6.000 mAh na 18W ngwa ngwa
OS Gam akporo 11 ya na MIUI 12 maka POCO
Njikọ 5G / WiFi / Bluetooth 5.0 / GPS / 3.5mm Jack / Dual SIM / IR Sensor / USB-C
Atụmatụ ndị ọzọ Akụkụ mkpisiaka mmetụta
Mkpụrụ na arọ: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm / 190 gram
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nweta Poco M3 Pro na ọnụahịa kachasị mma na nkwalite mmalite a